नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउन सरकार तयारी अवस्थामा, बजेट छुट्याइयो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउन सरकार तयारी अवस्थामा, बजेट छुट्याइयो !
काठमाडौँ – कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप तयार हुने बितिकै नेपाल ल्याउन सरकार तयार अवस्थामा बसेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन सक्दो छिटो नेपाल ल्याउन मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताएका हुन्।
शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेम ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गर्दै उनले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको लागि बजेट छुट्याइएको जानकारी गराए।
“कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनको लागि बजेट छुट्याएर राखिएको छ। भ्याक्सिन चाँडै पाउनका लागि नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छौं ।”,उनले भने।विश्वका विभिन्न देशहरुमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप बनिरहेको उल्लेख गर्दै जुन देशमा बनेपनि आफूहरु खोप नेपाल ल्याउन तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए।
रुसले भ्याक्सिनको विकास गरेको र अन्य देशले पनि कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हाँसिल गरिरहेको उनले जानकारी गराए। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्तराष्ट्रसंघसँग भ्याक्सिनका लागि समन्वय गरेर पहल शुरु गरिसके दावी गरे।
“हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्तराष्ट्रसंघसँग भ्याक्सिनका लागि समन्वय गरेर पहल शुरु गरिसकेका छौं ।”,उनले भने।
अहिले विश्वका विभिन्न देशहरुमा कोरोना भ्याक्सिन निर्माण भैरहेको छ। रुसले विश्वकै पहिलो कोरोना भ्याक्सिन निर्माण गरेको दावी गरेको छ भने उक्त खोप विभिन्न देशहरुमा परीक्षण पनि भइरहेको छ।